Chii chinonzi Outsourcing uye ndeapi mabhenefiti kune Ecommerce? | ECommerce nhau
El Outsourcing inzira inoitwa nekambani yeEcommerce kuhaya imwe kambani kutora basa rekunze usingashandise vashandi vako. Izvi zvinozivikanwa se "kutsvagisa basa" uye nhasi rave kuita seyakareruka sevhisi kumabhizinesi mazhinji epamhepo.
1 Chii chinonzi Outsourcing?
2 Ndeapi mabhenefiti ekutsvaga kunze mue-commerce?
Chii chinonzi Outsourcing?
NeKutsvaga, mazhinji e-commerce makambani outsource ekunze masevhisi kuita akasiyana mashandiro uye mashandiro emabasa akadai sekuburitsa chigadzirwa. Pfungwa yekutsvaga muEcommerce ndeyekuvandudza e-commerce manejimendi nechinangwa chekupedzisira chekudzikisa mutengo.
Muzviitiko zvakawanda, makambani ari kuhaya Outsourcing masevhisi Iwo madiki uye epakati makambani eEcommerce. Kune zvakare nzira dzakawanda umo a Kunotsvaga kambani zvinogona kubatsira zvakanyanya kune aya mabhizimusi epamhepo sezvo vachigona kupa webhu dhizaini, kusimudzira uye mashandiro ekushandisa manejimendi, vanogona kutopihwa basa kusimudzira bhizinesi kana zvigadzirwa online.
Ndeapi mabhenefiti ekutsvaga kunze mue-commerce?
ari zvakanakira kuburitsa kunze mune ecommerce Ivo vanotanga nenyaya yekuti ibasa rinobatsira. Iko kudiwa kwemabhizimusi eEcommerce kudzikisa mashandiro emari ndizvo chaizvo zvezvimwe zvikonzero nei masevhisi aya achizivikanwa. Kunyorera makambani ipa logistics uye mamwe mabasa kune epamhepo kushambadzira pamutengo unodhura.
Naizvozvo, mazhinji e-commerce mabhizinesi anotendeukira kunotsvaga kungo chengetedza mari mune avo mashandiro ekuita. Kuwedzera kune izvi, isu tese tinoziva kuti bhizinesi repamhepo rinokwikwidza zvakanyanya, saka a Ecommerce inogona zvakare kubatsirwa kubva Outsourcing Kutenda nekusimudzirwa uye kugadzirisa kwebhizinesi rako paInternet.
Pamwe chete nezviri pamusoro, iyo Kunze kwekutsvaga kunogona kuita kuti zvigadzirwa zvako zvirairwe kuburikidza neyakavimbika uye yakajeka gadziriso sisitimu. Iwe unokwanisa kuwana tsamba uye nekuparadzira maratidziro uye nepo zvese izvi zvichiitika, tarisa zvakakwana kubhizimusi rako reEcommerce.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » StartUps uye vanamuzvinabhizimusi » Chii chinonzi Outsourcing uye ndeapi mabhenefiti kune Ecommerce?
Carlos Ayuso akadaro
Chinyorwa chinonakidza kwazvo nezve kuburitsa mukati meecommerce. Ini ndinofunga ndiwo maitiro ayo, anowedzera, madiki uye epakati-epamakambani makambani akatsaurirwa kutengesa epamhepo anofanirwa kutora kuitira kuti akure uye ave nehuremu hwakawanda pakusangana nemazuva akadai seChishanu Chishanu kana Kisimusi.
Kambani yangu TURYELECTRO, takazvipira kupa masevhisi aya.
Pindura Carlos Ayuso
Maitiro ekugadzirira yako Ecommerce yeBlack Chishanu (Nhema Chishanu)